5 Amadolobha Wephathi Ehamba phambili EYurophu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 5 Amadolobha Wephathi Ehamba phambili EYurophu
(Kugcine ukubuyekezwa On: 13/08/2021)
Izinqaba zaseYurophu kanye ezitaladini ebukekayo futhi izindawo bekulokhu kulungiselelwa kwezinganekwane ezimangalisayo izinkulungwane zeminyaka. Kuze kube namuhla iYurophu iyindawo ephumelela kuyo yonke indawo ephathini. Kuyinto mecca amaphathi izihambi ezivela emhlabeni wonke like bachelor kanye bachelorette uhambo. Ngakho, sikhethe kahle kakhulu 5 amadolobha ephathi eYurophu weholide eliyindida nelisendle.
Berlin Amsterdam, imigoqo yokubhubhisa ekilabhini enkulu kunazo zonke eYurophu, ngu travel isitimela noma iklabhu ye-hopping, qinisa ibhande lakho lesihlalo sohambo olude kakhulu okwamanje.
Ukuhamba Kwezitimela Kuyindlela Eco-Friendly Kakhulu Yokuhamba eYurophu. Lesi sihloko kulotshiwe sokuba umuntu afunde izindlela zemininingwane Hamba nge- Gcina Isitimela, I Amathikithi Eshibhile kakhulu Amathikithi Esitimela Emhlabeni.
1. Iphathi eBerlin, Germany
Elinye lamadolobha anobungani kunabo bonke eYurophu, IBerlin yi-mecca yabaculi, abaculi, nama-DJs ahamba phambili emhlabeni. Umlando namasiko ayo kube nomthelela ukwehlukahlukana kwayo nendlela evulekile evulekile, okusho ukuthi noma yini iya. Ngakho-ke, IBerlin yidolobha lephathi elakhe kakhulu futhi elingcono kakhulu eYurophu.
Iklabhu ye-Berlin kanye nephathi yesehlakalo kuvame ukuqala sekwephuzile emva kobumnyama. Uma ufuna ukuzwa impilo yasebusuku yaseBerlin njengeBerliner, ukupakisha izicathulo ezintofontofo, ukugqoka okujwayelekile nokufika ngoLwesihlanu. Thatha isiphuzo kwelinye lamabha amaningi eBerlin bese ulibangisa endaweni yezimboni.
Amakilabhu amahle kakhulu eBerlin afihlwe endaweni yezimboni zaseBerlin nangaphansi kwamathrekhi wesitimela. Zilungiselele iphathi elingayeki, noma ume kuphela lapho umuntu wokugcina emi. Ubusuku bokuhlaselwa kwabakwaBerliners buqala ekuqaleni 1 ngikhona ngeMigqibelo kuze kube yiSonto ebusuku. This definitely puts Berlin in the craziest and best party cities in Europe with tourists and clubbers traveling from all over the world.
Iyiphi Iklabhu Yasebusuku Ehamba phambili eBerlin?
Uma ukhuphukela kuma-48h wokuhlala futhi unesikhathi sekilabhu elilodwa kuphela, khona-ke qiniseka ukwenza iphathi eBerggin. Imisindo ephambili ye-techno neyendlu izamazamisa umhlaba wokudansa yonke impelasonto.
UFrankfurt uye eBerlin ngesitimela
Copenhagen ukuya eBerlin ngesitimela
Hanover eBerlin ngesitimela
IHamburg ukuya eBerlin ngesitimela
2. Iphathi eBudapest, Hungary
Emini namahora okushona kwelanga, I-Budapest iyisimangaliso esiphelele ngamatshe ayigugu ayo wezakhiwo namasayithi. Njengoba uzulazula emigwaqweni, amehlo akho awakwazi ukugcina ithrekhi yezimpawu ezinhle kakhulu eYurophu. kodwa, ebusuku uzothola umhlaba ohlukile, a world of derelict buildings that turn to Europe’s most unusual bars, futhi lesi simo esiyingqayizivele sibeka iBudapest kithi 5 amadolobha aphambili e-Europe.
Ngemuva kobumnyama, kwenye indawo, lapho ingekho khona inhlonipho noma imithetho yendlu, izinto nakanjani zizokuya endle.
Iyiphi Iklabhu Yasebusuku Ehle Kunayo Budapest?
ISzimpla Kert ibha yokuchitheka kweBudapest eyisakhiwo esifundeni 7 nesigaba sayo se-labyrinthine esitezi ephezulu nokuvakasha okumelwe kube ngesipiliyoni esimangazayo ngobusuku bephathi beBudapest.
IVienna kuya eBudapest ngeSitimela
Hududulela eBudapest ngesitimela
UMunich ukuya eBudapest ngesitimela
I-Graz eya eBudapest ngesitimela
3. Iphathi ePrague, I-Czech Republic
IPrague ingelinye lamadolobha amahle kakhulu eYurophu. Emini uzozwa sengathi ubuyile ngesikhathi ezinhlanganweni, izikhulu, and knights stories, kepha phakathi nobusuku ohambela uhambo lwakho lokuya ebusuku, lapho kuvinjelwa khona imigoqo ngemuva komnyango.
Umuzi ugcwele izingadi zikabhiya ngasemfuleni, ezinkantini, nemigoqo enokubukwa okumangazayo kwedolobha nangempela yindawo eyaziwayo yeklabhu.
Iyiphi Iklabhu Yasebusuku Ehle Kunayo ePrague?
IPrague iyikhaya leklabhu elikhulu kunazo zonke eYurophu, Indaba yesi-5 I-Karlovy Lazne Club. Ngakho, uma uhlela uhambo lokuya ePrague nabangani bakho noma i-Eurotrip yokuhlola amadolobha aphambili eYurophu, khona-ke lokhu kuyima-ku-adventure yakho. Yazi ukuthi uma usungena eminyango yekilabhu, ungahle uphume kumuntu ohlukile ngokuphelele Noma yini eyenzeka ePrague, uhlala ePrague.
ENuremberg kuya ePrague ngesitimela
UMunich ukuya ePrague ngesitimela
IVienna kuya ePrague ngesitimela
4. Iphathi e-Amsterdam, Abase Netherlands
Idume ngemisele yayo emihle futhi ikhofi izitolo, I-Amsterdam ingowaseYurophu odumile ukuphela kwamaholide. Ine-vibe enokuthula kakhulu, naphezu kwesifunda sayo esibomvu nezibi zekhofi.
Ngenkathi amaDashi ethanda ukuhlangana kokhiye abaphansi, uma ubuza izivakashi ezivela kuwo wonke umhlaba, bangasho ukuthi i-Amsterdam inolunye uhlangothi. In comparison to the other cities in our best party cities in Europe, e-Amsterdam, uzothola imisindo yama-trance emakilabhini amaningi, kodwa futhi umculo bukhoma. Imibukiso ebukhoma ithandwa kakhulu e-Amsterdam.
Iyiphi Iklabhu Yasebusuku Ehle Kunayo Amsterdam?
Imbalwa nje yamakilabhu omculo abukhoma ahamba phambili iMelkweg neBimhuis, nama-nightclub amahle kakhulu yiDe Marktkantine noShelter.
I-Bremen eya e-Amsterdam ngesitimela
IHannover eya e-Amsterdam ngesitimela
I-Bielefeld eya e-Amsterdam ngesitimela
IHamburg eya e-Amsterdam ngesitimela
5. Iphathi eVienna, Austria
Idolobha sonke esilaziyo nge-opera yalo engakaze ibonwe kanye nempilo yamasiko nalo linobusuku obumnandi nobumnandi. Ngokuphikisana nezinye izigcawu zobusuku obusetshenziswa emazweni angomakhelwane, indawo yasebusuku eVienna inobungane futhi ivuseleleka kakhudlwana. Ngokwesibonelo, imali yokungena eVienna iphansi nezinqubomgomo zomnyango ezivuselelekile.
eVienna, ungathola amakilabhu we-techno kakhulu, kodwa futhi nangaphansi komhlaba kanye nezitayela ze-acid kwamanye amakilabhu.
Iyiphi Iklabhu Yasebusuku Ehle Kunayo Vienna?
Amaphathi we-techno ahamba phambili iya ku-Das Werk no Grelle Forelle. Uma ufuna iklabhu eshayayo yibhekise eGrainel, umgwaqo ohamba maphakathi nedolobha. Yilapho uzothola ama-pubs amaningi kanye namakilabhu ahlanganiswe ndawonye. Qiniseka ukuthi ubheka iVenster99.
U-Elektro Gonner uyisibonelo esihle sokuphila ebusuku kweVietnam. Itholakala esitolo kagesi, futhi yisikhala sokufakwa kwevidiyo nomculo we-electro. ILeb Loft bar itholakala phezulu kweSofitel Vienna Stephansdom enendawo yokushona kwelanga nokubukwa kwedolobha.
ISalzburg eya eVienna ngesitimela
UMunich ukuya eVienna ngesitimela
I-Graz eya eVienna ngesitimela
Dudulela eVienna ngesitimela
Imininingwane engaphezulu Mayelana Nezinhlangano eYurophu
Yisiphi Isikhathi Esihle Kakhulu Ukuthola Ubusuku Basebusuku eYurophu?
Ukuwa kwentwasahlobo nokuqala kwesikhathi kuyizinkathi ezinhle kakhulu zokuhamba nokuthola amadolobha aphambili kakhulu eYurophu.
Uyini Umugqa Wentengo Yezimali Zokungenela Kuma-nightclub ase-Europe?
Imali yokungena iyahluka kuye emazweni. Amadolobha amaningi aseYurophu ashibhile kakhulu, Ngokwesibonelo, I-Prague neBudapest, 5-20 euros entrance and alcohol at reasonable prices, ezinye izindawo zibiza kakhulu, kodwa into ebaluleke kakhulu, uzofika kusenesikhathi, ngakho-ke kuzofanela ume isikhathi eside kulayini.
Imuphi Idolobha Onobusuku Obumnandi Kakhulu eYurophu Ngobusuku Bonyaka Omusha NangoKhisimusi?
Idolobha elihle kakhulu lamaqembu kaKhisimusi nangoNcibijane ngokuqinisekile iBerlin uma uhamba isabelomali Friend. I-Amsterdam nePrague zihle ebusika, kepha kuhlakaniphile.
ukuze uphethe, I-Europe inokuthile okungakunikeza nganoma yikuphi ukunambitheka, isifiso, izinga lobubi, nebhajethi. Okuphezulu kwethu 5 amadolobha ephathi anikezela okuhle kakhulu emhlabeni. Ngokuqinisekile ungaqala ngobumnene nge-bar hopping noma amakilabhu womculo bukhoma futhi uqhubeke ngokuya phansi kumdanso oshubile eYurophu, bonke ngobusuku obubodwa. Ukubeka konke phezulu, yonke imizi itholakala kalula nge isitimela travel, ngakho-ke uma kuyiphupho lakho elixakile ukuba nephathi lephathi yepasika futhi uvakashele konke 5, bese i-Europe ilindele.
Lapha e Londoloza Isitimela, sizojabula ukukusiza ekutholeni amathikithi ashibhile wesitimela kunoma yimaphi amadolobha amahle eqembu ohlwini lwethu.
Ngabe ufuna ukushumeka okuthunyelwe kwethu kwebhulogi okuthi “AmaDolobha Ama-5 Ahamba Phambili eYurophu” kwisayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-party-cities-europe%2F%3Flang%3Dzu ‎- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Uma ufuna ukuba abe nomusa kubasebenzisi bakho, ungakwazi ukuqondisa kwabo ngqo amakhasi ethu search. Kulesi isixhumanisi, uzothola imizila yethu ethandwa kakhulu yezitimela - https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une izixhumanisi lwethu IsiZulu kokwehla Amakhasi, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml, futhi ungakwazi ukushintsha / fr ukuba / de noma / es kanye ngezilimi ezingaphezu.
AmsterdamParty berlinparty budapestparty europenightlife europepartycity nightlife Party PragueParty UkuvakashaVienna viennaparty